डलरकाे भाउ अाकासियाे, एक डलर किन्न १०७.६८ रूपैयाँ – www.agnijwala.com
डलरकाे भाउ अाकासियाे, एक डलर किन्न १०७.६८ रूपैयाँ
काठमाडौं बैशाख २३
अमेरिकी डलरने पालमा अमेरिकी डलर अधिमूल्यन भएर एक वर्षयताकै सबैभन्दा उच्च विन्दूमा पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकले आइतबारका लागि एक अमेरिकी डलरको विनिमयदर १०७.२८ रुपैयाँ तोकेको छ। केन्द्रीय बैंकले एक डलर खरिद गर्न १०६.६८ रुपैयाँ र बिक्री दर १०७.६८ रुपैयाँ तोकेको हो।
एक समय अमेरिकी डलर १०९ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। २०७३ को चैतमा १०३.४६ रुपैयाँ पुगेको डलर त्यसयता त्यही हाराहारीमा रहँदै आएको थियो।
किन बढ्यो डलरको भाउ?
भारतीय मुद्रा भारुको नेपालमा विनिमयदर निश्चित छ। १०० भारुको नेपालमा १६० रुपैयाँ हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा विनिमयमा जति उतार चढाव आए पनि भारुसँग हाम्रो विनिमयदर स्थिर रहन्छ। पछिल्लो समय डलरसँग भारु अवमूल्यन हुँदा त्यसको असर नेपालमा परेको हो। भारतकाे व्यापारिक केन्द्र मानिने मुम्बई मनी मार्केटका लगानीकर्तामा डलर मोह देखिँदा भारु अवमूल्यन भइरहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थ तथा सुनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उतारचढावले डलरको मूल्य अाकाशिन सघाएको देखिन्छ। अमेरिकी सेयर बजारप्रति बढ्दो आकर्षण डलर अधिमूल्यनको अर्को कारण हो।
डलरको भाउ बढ्दा नेपालीलाई के फाइदा?
आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा डलरको मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली उपभोक्ताले आयातित वस्तु एवं सेवामा मूल्य वृद्धि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो मुलुकबाट हुने आयातमा अझ छिटो यसको असर पर्नेछ। डलर महँगो हुँदा सरकारमा वित्तीय दायित्व बढ्नेछ। किनभने विदेशी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी महँगिएको डलरमै गर्नुपर्ने हुन्छ।
डलरको भाउ बढ्दा नेपालीले फाइदा पुग्ने एउटा मुख्य क्षेत्र भनेको रेमिट्यान्स हो। वैदेशिक रोजगारीको रकम रेमिट्यान्सबाट डलरमै आउने हुँदा नेपालमा रहेका परिवारले केही बढी रकम बुझ्नेछन्। पर्यटक, विदेशी मुद्रामा सेवा लिने व्यवासायीलाई लाभ पुग्नेछ।